एनआईसी एशिया बैंकको प्रसंसा गर्दा नबिल बैंकका सिइओ अनिल शाह कारवाहीमा ! ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
एनआईसी एशिया बैंकको प्रसंसा गर्दा नबिल बैंकका सिइओ अनिल शाह कारवाहीमा !
प्रसंग हो, नबिल बैंकले ल्याएको ‘नारी निक्षेप र कर्जा अफर’ कार्यक्रमको । कार्यक्रममा सिइओ शाहले नबिलकोभन्दा बढि चर्चा प्रतिस्पर्धी बैंक एनआइसी एसियाको गरे । ‘एनआइसीले पछिल्लो समय निकै फड्को मारेको छ । म नढाँटी भन्छु अबको हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा एनआईसी एशिया बैंक नै हो’ नविलका सिइओ शाहले भने ‘ एनआईसी एशियाले हामीले नसोचेको कुरा गरेर देखाइदियो। उसको प्रगति अनुकरणीय र प्रशंसनीय छ।’
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाइरहेका अनील केशरी शाह यतिबेला नबिल बैंकको सिइओ पदमा छन् । तर उनको एक बयानले नविल बैंकभित्र भूकम्प पैदा गरिदिएको छ । उनको अभिब्यक्तिलाई लिएर सञ्चालक समितिले स्पष्टीकरण समेत सोधेका छन् ।
प्रसंग हो, नबिल बैंकले ल्याएको ‘नारी निक्षेप र कर्जा अफर’ कार्यक्रमको । कार्यक्रममा सिइओ शाहले नबिलकोभन्दा बढि चर्चा प्रतिस्पर्धी बैंक एनआइसी एसियाको गरे । एनआईसी एसिया बैंकको खुलेर प्रशंसा गर्दै शाहले आफुलाई समेत पछि पारिदिएको बताएका थिए ।
पछिल्लो समय एनआइसी एशिया बैंकले निकै फड्को मार्न सफल भएको उनको कथन थियो । ‘एनआइसीले पछिल्लो समय निकै फड्को मारेको छ । म नढाँटी भन्छु अबको हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा एनआईसी एशिया बैंक नै हो’ नविलका सिइओ शाहले भने ‘ एनआईसी एशियाले हामीले नसोचेको कुरा गरेर देखाइदियो। उसको प्रगति अनुकरणीय र प्रशंसनीय छ।’ सिइओ शाहले एनआईसी एशिया बैंकले एकपछि अर्काे गर्दै शाखा विस्तार गरेको र साना तथा मझौला व्यवसायी उन्मुख कार्यक्रममा ठूलो उपलब्धि हाँसिल गरेको बताए । ‘नेपालमा यो क्षेत्र ठूलो छ र एनआईसीले यसमा हात बढाएको छ ।’
एउटा बैंकको सिईओले अर्काे बैंकको खुलेर प्रसंसा गरेपछि सञ्चालक समितिमा चस्का पस्यो । समितिले सिइओ शाहलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएको छ । एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी ब्यक्तिले प्रतिस्पर्धी बैंकका बिषयमा खुलेर प्रसंसा गर्नु लगत भएको ठहर समितिले गरेको छ । शाहलाई मिडियामा बोल्दा ख्याल राख्न चेतावनी पनि दिएको छ ।
पछिल्लो समय आक्रामकरुपमा आफ्नो पहुँच अगाडी बढाइरहेको एनआइसी एशियाले देशभर २ सय ८१ शाखा विस्तार गरेको छ । तर नविल बैंकसँग देशभर ७५ शाखा मात्रै छन् । दुवै बैंकको चुक्ता पँजी ८ अर्ब भएपनि चालु आर्थिक बर्षको मुनाफा भने नविलले बढि गरेको छ । नविल बैंकले २ अर्ब ४ करोड मुनाफा गरेको छ भने एनआइसी एशियाले १ अर्ब ५० करोड मुनाफा गरेको छ ।
The post एनआईसी एशिया बैंकको प्रसंसा गर्दा नबिल बैंकका सिइओ अनिल शाह कारवाहीमा ! appeared first on YesKathmandu.com.